Nlekọta ọgwụ nchịkọta ọgwụ na-edozi ihe - AASraw ntụ ntụ
Usoro ọgwụgwọ ọrịa
/ ngwaahịa / Usoro ọgwụgwọ ọrịa
Ọgwụ Nlekọta Ahụike
Anyị bụ ndị na-agwọ ọrịa ọgwụ na-agwọ ọrịa, Nlekọta ọgwụ na-agwọ ọrịa maka ire ere, Dịka anyị kwere nkwa, ihe niile anyị na-agwọ ọrịa ọgwụ na ọgwụ na-adị ọcha karịa 98%.
Anesthesia ntụ ntụ General Description
N'iji ọgwụgwọ (ma ọ bụ ịwa ahụ na nrịịbà), nkwụsị ọbara ma ọ bụ nhụjuanya bụ ọnọdụ nke mmetụta uche ma ọ bụ mmata. Ọ nwere ike ịgụnye analgesia (enyemaka ma ọ bụ igbochi ihe mgbu), ọrịa mkpọnwụ (ntụrụndụ ahụ), ụbụrụ (mgbapụta ncheta), ma ọ bụ amaghị ihe ọ bụla. A na-ekwu na onye ọrịa nọ n'okpuru ọgwụ nke ọgwụ anestetiiki dị ka anesthetized.
Ngwurugwu anesthesia na-eme ka arụ ọrụ ahụike na-enweghị ihe mgbochi ga-eme ka ihe mgbu dị njọ ma ọ bụ nke na-enweghị ike ịchọta onye ọrịa na-adịghị agwọ ọrịa. Atọ nchịkọta atọ dị nrịanwụ dị:
Nchịkọta ọrịa nchịkọta na-eme ka ọ ghara ime ka ọ ghara ime ihe ọ bụla.
Ọkpụkpọ na-egbochi usoro nchebe nke etiti ahụ n'ụzọ dị ala karị, na-egbochi nchegbu na okike ncheta oge na-enweghị isi na-akpata amaghị ihe ọ bụla.
Ngwunye ntụpọ mpaghara na ntụpọ nke mpaghara, nke na-egbochi ntinye nke mkpali akwara n'etiti akụkụ a na-atụkwasị anya nke ahụ na usoro nhụjuanya nke bụ isi, na-akpata ụfụ mmetụta na akụkụ ahụ ezubere iche. Onye ọrịa nọ n'okpuru mpaghara ma ọ bụ mpaghara ntụsara ahụ na mpaghara ahụ nọgidere na-ama, ọ gwụla ma ọ bụ nchịkọta izugbe ma ọ bụ sedation na-edozi n'otu oge ahụ. Ọdịdị sara mbara abụọ dị:
Mgbochi nke ime ụlọ na-egbochi nghọta dị na akụkụ dịpụrụ adịpụ nke ahụ, dị ka ịgụta ezé maka ezé ma ọ bụ inye ntụpọ akwara igbochi mmetụta uche na akụkụ dum.
Central, ma ọ bụ neuraxial, mgbochi na-eduzi anestetiiki na mpaghara nke usoro nhụjuanya nke etiti ahụ, na-egbochi mmetụta na-abata site n'èzí nke ebe ahụ. Ihe omuma atu gunyere anesthesia epidural and spinal anesthesia.
Na-akwadebe maka usoro ahụike, onye nlekọta ahụike na-enye ọgwụgwọ na-ahọrọ na-ekpebi usoro nke otu ma ọ bụ karịa ọgwụ ọjọọ iji nweta ụdị na ogo nke àgwà nhụjuanya kwesịrị ekwesị maka ụdị usoro na onye ọrịa ahụ. Ụdị ọgwụ ndị eji eme ihe na-agụnye ọgwụ ndị na-agwọ ọrịa, ọgwụ ndị na-agwọ ọrịa, ọgwụ ọjọọ, ọgwụ ndị na-egbochi neuromuscular, narcotic, na analgesics.
E nwere ma nsogbu ma ọ bụ obere ihe nhụjuanya. Ihe atụ nke ihe ize ndụ ndị dị mkpa gụnyere ọnwụ, mkparụ obi na mgbagwoju anya ma ọ bụ obere ihe ize ndụ nwere ike ịgụnye ọgbụgbọ na ịgba agbọ na ịme ọgwụ. O yikarịrị ka mgbagwoju anya na-adabere n'ihe ize ndụ nke ihe dịgasị iche iche metụtara ọrịa ahụ onye ọrịa, mgbagwoju anya nke ịwa ahụ na ụdị ụdị anesthetic ji. N'ime ihe ndị a, ahụike onye ahụ tupu ịwa ahụ (nke ASA na-agbakọ usoro nke ịhazi ọnọdụ anụ ahụ) na-enwe mmetụta dị ukwuu na ihe gbasara ihe gbasara nke a. Ndị ọrịa na-eteta n'ime nkeji nke anesthetic na-akwụsị ma nwetaghachi uche ha n'ime awa. Otu ihe dị iche bụ ọnọdụ a na-akpọ oge na-adịghị agwụ aghara, nke nwere nchekasị na-adịgide adịgide na-adịgide adịgide ma ọ bụ ọnwa, nke kachasị emekarị n'ime ndị na-arịa ọrịa obi na ndị agadi.
Kedu ụdị ụdị nsị nsị?
Nchịkọta ọrịa nchịkọta mpaghara bụ obere akụkụ nke ahụ maka obere usoro. Dịka ọmụmaatụ, ịnwere ike ịnweta ọgwụ na-abanye na nke ahụike iji gbochie mgbu. Ị nwere ike ịmụrụ anya n'oge usoro.
Nchịkọta ọrịa nchịkwa mpaghara na-eme ka ihe mgbu dịrị akụkụ buru ibu nke ahụ gị. I nwekwara ike inweta ọgwụ iji nyere gị aka ịkwa ahụ ma ọ bụ ihi ụra. Ụdị nchịkwa nke mpaghara na-agụnye:
Mgbochi akwara elu. Nke a bụ ihe mgbagwoju anya iji gbochie nhụjuanya gburugburu otu akwara ma ọ bụ ìgwè akwara. A na-ejikarị aka maka usoro na aka, ogwe aka, ụkwụ, ụkwụ, ma ọ bụ ihu.
Ngwurugwu na akuku ogwu. Nke a bụ ihe mgbagwoju anya nke dị n'akụkụ ọkpụkpụ azụ na irighiri akwara nke jikọtara na ya. Ọ na-akpata ihe mgbu site n'akụkụ dum nke ahụ, dịka afọ, hips, ma ọ bụ ụkwụ.
Nchịkọta ọrịa nchịkwa n'ozuzu emetụta ụbụrụ gị na akụkụ ahụ gị. Ị nwere ike ịnweta ọgwụ ụfọdụ site na vein (n'ime mkpụrụ obi, ma ọ bụ IV), ị nwere ike iku ume na ụfọdụ ọgwụ. Na nkwonkwo ịgwọ ọrịa n'ozuzu, ị na-amaghị ihe ọ bụla na ị naghị enwe ihe mgbu n'oge ịwa ahụ.
Kedu ka ị ga-esi belata ihe ize ndụ ị nwere mmetụta ndị ọzọ?
Ihe kachasị mkpa i nwere ike ime iji gbochie nkwụsịtụ nsị ntụpụ anụ ahụ bụ ijide n'aka na onye ọrịa anesthesiologist na-etinye aka na nlekọta gị. Dibịa anesthesiologist bụ dọkịta na-ahụ maka nkwụsị nsị, njikwa ihe mgbu na nlekọta ahụike dị egwu.
Tupu ịwawa gị, izute onye nkịta ọgwụgwọ ahụike iji kwurịta akụkọ banyere ahụ ike, ahụike na ndụ gị. Ihe ọmụma a ga - enyere onye ọrịa anesthesiologist aka ịmata otú ị ga - esi meghachi omume na ntụ ntụ nsị ma mee ihe iji belata ihe ize ndụ gị. Nzukọ a bụkwa oge dị mma maka ịjụ ajụjụ ma mụta ihe ị ga-atụ anya ya.
Inweta ezigbo ihe onwunwe sitere na ndị na-ere ahịa kwesịrị ekwesị pụtara ọtụtụ ihe, iji kwenye gị mma nke ọma, nkwenye siri ike na ịzụ ahịa.
Ọ dịghị ngwaahịa a chọpụtara na kenha gị nhọrọ.